‘फेसन डिजाईन पश्चिम नेपालमा फस्टाउन सकेको छैन’ – ।।दाङ खबर।।
Home / प्रदेश खबर / ‘फेसन डिजाईन पश्चिम नेपालमा फस्टाउन सकेको छैन’
‘फेसन डिजाईन पश्चिम नेपालमा फस्टाउन सकेको छैन’
२०७४, १७ कार्तिक शुक्रबार १७:०३	प्रदेश खबर, ब्लग/विचार, मुख्य समाचार
दाङ घोराही–१५ निवासी फेसन डिजाइनर गीताञ्जली पुरी लामो समय देखि या विषयमा काम गर्दै आउनु भएको छ । फेसन डिजाइन पछिल्लो समय धेरै युवतीहरुको लागि आकर्षणको विषय समेत बनेको छ । विगतको तुलनामा विस्तारै उदार बन्दै गैरहेको नेपाली समाजमा फेसन डिजाइनको विषय फस्टाउन खोज्दै छ । यसैविषयमा दाङ खबरले फेसन डिजाइनर गीताञ्जली पुरीसंग गरीएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
फेसन डिजाइन भनेको के हो ?
मानव जीवनको सुरवातको सँगसँगै फेसनको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसै कारणले फेसनलाई मानव जीवनको एउटा अभिन्न भाग मान्न सकिन्छ । समय र परिस्थिति अनुरुप मानिसको चाहना अनुसार कपडाहरुको डिजाइनको प्रतिपादन गर्नु नै फेसन डिजाइन हो ।
मीठो खानु राम्रो लाउनु हरेक मानिसको चाहना हुन्छ । यही चाहना अनुरुप उसले आफूलाई समाजमा पृथक किसिमले चिनाउन चाहन्छ । त्यसै कारणले उ आफ्नो व्यक्तित्व झल्काउने कपडा लगायर समाजमा स्थापित हुन चाहन्छ । फेसन दुनियाँमा भन्ने गरिन्छ । ूँबकजष्यल चभाभिअतक तजभ उभचकयलबष्तिथ या बल ष्लमष्खष्मगबूि फेसनले हरेक व्यक्तिको व्यक्तित्व पहिचान गराउँछ । त्यसै कारणले समाजा हाम्रो फेसनले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
यो विषय किन पढ्नुभयो ?
नेपालमा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो नयाँ पुस्तालाई राम्रो रोजगारीको व्यवस्था हुनसकेको छैन । त्यसै कारणले नेपालबाट नयाँ युृवा पुस्ता दिनप्रति दिन विदेशीने क्रम रहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी भएको कुृरा हो । तर मेरो विचारमा के लाग्छ भने, आफनै मातृभूमिमा सजिलैसँग आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट र विश्वासले मैले यो विषय अध्ययन गरेकी हुँ ।
हरेक मानिसको जीवन आ–आफ्नो इच्छा आकांक्षाहरु हुन्छन् । त्यसै गरी मेरो पनि बाल्यकालदेखि नै लुगाहरुको डिजाइन कसरी बनाउँछन् भन्ने कुरातिर धेरै ध्यान जाने गथ्र्यो । मलाई स्केचिङ मा पनि उत्तिकै रुची लाग्ने गथ्र्यो । डिजाईनिङ बनाउँदा पनि मैले लुगा र गहनाको डिजाइनहरु धेरै बनाउने गर्दथे । अलि पछि टेलिभिजनहरु हेर्दै जाँदा झनै यसप्रति मेरो रुची बढ्दै गयो र फेसन डिजाइनिङ नै पढ्छु भन्ने इच्छा जाग्यो ।
फेसन डिजाइनले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्छन्, यसप्रति तपाईको के धारणा छ ?
हरेक चिजको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष हुन्छन् । त्यो सबै आफूमा निर्भर हुन्छ की कुन पक्षतिर लैजाने । आफूलाई समाजको अगाडि कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर । हाम्रो समाजमा धेरै नै देखासीकीको चलन भएकोले होला अहिलेको नयाँ पीढिले आफूलाई के सुहाउँछ भन्दा पनि अरुले के लगाएको छ मलाई पनि त्यही चाहियो भन्ने खालको सोच भएकाले अलि असभ्य पहिरन भित्रिएका छन्, जनु पहिरन हाम्रो समाजमा राम्रोसँग एडजस्ट हुन सकेको छैन । त्यही देखासीकिको भावनालाई छोडेर हाम्रो समाजमा भिज्न सक्ने पहिरनलाई अंगालेर फेसन डिजाइनिङ र फेसन ट्रेन्डको बारेमा बुझ्न सके पछि यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पनि पार्न सक्छ ।
यो विषयमा पूर्वभन्दा पश्चिमतिर पिछडीएको कारण के होला ?
यो प्रोग्राम हामीले एकदमै छोटो समयमा अर्गनाइज गरेका थियौ, त्यसैले सोचेको जति सुझाबहरु पाइएन, सोचेको जति दर्शकहरु पनि आउनु भएन, सायद यस्तो प्रोग्राम कहिले नभएर होला तर हाम्रो पहिलो अपेक्षा अनुसार जति दर्शकहरु आउनुभयो । उहाँहरु सबै जना खुशी हुुनुहुन्छ । सबैलाई प्रोग्राम एकदमै राम्रो लाग्यो । त्योभन्दा खुशीको कुरा त अरु के नै हुनसक्छ र मेरो लागि । त्यसैले म आफ्नो फेम्ली, टिम मेम्बर, अर्गनाइज, दर्शकहरु सबैमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । मेरो लागि यो एकदमै अविस्मरणीय अनुभव भएको छ ।
काठमाण्डौमा यस्ता खालका प्रोग्रामहरु भइरहन्छन् तर अन्यत्र जिल्लाहरुमा भएको सुनिदैन, यसलाई सफल बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला ?
सबै भन्दा पहिले हामी सबैले फेसन डिजाइनिङको बारेमा धारणा स्वच्छ राख्नु पर्छ । फेसन शोलाई नराम्रो रुपले मात्र नहेरिदिनुहोस् । भर्खर हामीले जुन प्रोग्राम ग¥यो त्यहाँ गएका दर्शकहरुले त बुझ्नुभयो होला । काठमाण्डौमा यस्तो प्रोग्राम सामान्य रुपमा लिन्छ भने अरु ठाउँहरुमा अझै पनि फेसन फिल्डलाई भर्जि्निटिको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले अन्यत्र जिल्लाहरुमा पनि यसलाई प्रबल वा सफल बनाउनका लागि सबैमा बसेको फेसनप्रति सबैमा बसेको नकारात्मक छापलाई हटाएर फेसन फिल्डको सकारात्मक पक्षको बारेमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
यो कोर्ष पढेर छोराछोरी बिग्रिएको भन्ने गरिन्छ, यसको सबल पक्षलाई सुधार्न अभिभावकहरुलाई के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले त आफ्नो पढाई पूरा गर्नु छ । नेपालमा यसको मास्टर डिग्री छैन । त्यसैले बाहिर गएर पढाई पूरा गरेर फेरि आफ्नै ठाउँ दाङ मै आएर एउटा फेसन डिजाइनिङ खोल्न मन छ, ताकि धेरै मान्छेले आफ्नै ठाउँमा बसेर रोजगार पाओस् । भगवानको इच्छा र बुबा आमाको आशीर्वाद रह्यो भने मैले यो काम अवश्य पूरा गर्नेछु । र अन्तमा गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक परिवारलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्रर्याउँछु ।
२०७४, १७ कार्तिक शुक्रबार १७:०३
Previous शैक्षिक स्तोन्नतिका लागीे नारायणपुरमा ज्ञानमहाय हुने
Next रुकुममा टिपर दुर्घटना, पाँचजना गम्भीर घाइते